Ciidamada Amisom Oo Xasuuq Ka geystey Deegaanka Lafoole.
Sida ay sheegayaan warar hada nasoo gaarey ciidamada amisom ayaa xasuuq ugeystey dad rayid oo degan deegaanka lafoole ee gobolka shabeelaha hoose. Markii hore ciidamada amisom oo howgalo kasameynayey inta udhaxeyso deegaanka lafoole iyo carbiska ayaa lala beegsadey qarax iyadoo...
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Oo Ku Wajahan Dalka Turkiga.
Ra’iisal wasaaraha dowlada federaalka soomaali xasan cali kheyre ayaa goordhow u anbabixi-doona dalka turkiga. Kheyre ayaa halkaas kula kulmi doona madaxda dalka turkiga ugu horeeyo dhigiisa binali yildirim iyo qaar kale oo katirsan madaxda turkiga. Sidoo kale ra’iisal wasaaraha...
Madaxda Maamulgoboleedyada Oo Aqbaley Baaqii Madaxweyne Farmaajo, Sheegeena Iney ka Qayb-Gali Doonaan Shirka 28-Ka Kadhici Doona Muqdisho.
Madaxda iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliya ayaa waxey sheegeen inay ka qayb galeyaan shirka wadatashiga ah ee 28-bishan lagu wado inuu kadhaco magaalda muqdisho. Gudoomiya goloha iskaashiga dowlad goboleedyada ahna madaxweynaha maamulk goboleedka puntland cabduweli gaas...
Madaxweyne Farmaajo Iyo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Oo Isla Gartey In Al-Shabaab Guluf Dagaal Lagu Qaado.
Madaxweynaha dowlada federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maalmo ka hor uduuley dalka Uganda si uu dhigiisa ugala hadlo xaalada amniga soomaaliya ayaa shaley halkaasi uga sii gudbey dalka itoobiya si ugala hadlo madaxda itoobiya arinka ku saabsan amniga...
Maamulka Gobolka Banaadir Oo Kafaala Qaadey Waxbarashada Caruurtii Ku Agoontowdey Xasuuqii Soobe.
Maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay iney ku dhawaaqeen kafaala qaadida ardeydii aabayaashooda ku waayey qarixii soobe ee magaalda muqdisho. Gudoomiyaha ayaa sheegey iney booqdeen qaar kamid ah qoysaskii waxyeelada kasoo gaartey mashaqadii kadhacdey isgooska km5 ee muqdisho....
Madaxweyne Farmaajo Oo Madaxweynaha Uganda Kala Hadley Ladagaalanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha dowlada federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo safar ku jooga dalka Uganda ayaa dhigiisa Uganda kala Hadley xaalada amniga ee soomaaliya iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa dhamaan gobolada dalka soomaaliya. Madaxweynayaasha soomaaliiya iyo Uganda...
Madaxweynaha Koonfurgalbeed Oo Saraakiisha Maamulkiisa Iyo Amisom Kala Hadley Dagaal Ka Dhan Ah Al-Shabaab.
Horjoogaha maamulgoboleed koonfur-galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa waxaa uu saraakiisha ciidamada daraawiishta maamulka uu hogaamiyo iyo ciidamada itoobiya oo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midowga afrika kuna sugan koonfurgalbeed kala Hadley sidii al-shabaab looga saari...
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeele Oo Maanta Lagu Caleema Saari Doono Magaalada Jowhar.
Maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka hirshabeele ayaa maanta lagu balansanyahay in lagu caleema saaro magaalada jowhar oo xaruun u ah maamulkaasi. Caleema saarkan madaxweyne waare oo dhowr jeer u baaqdey arimo farsamo aawadood ayaa maanta lafilaya inuu kadhaco jowhar....
Taliyaha Ciidanka Booliiska Puntland Oo Dhaawacey Ku Xigeenkiisa.
Shir ay ku lahaayeen madaxda amniga maamulka puntland oo uu ka qeyb ahaa teliyaha booliska puntland general ereg ayaa xaley waxaa lagu qabtey hotel juba ee magaalada garoowe. Shirkan ayaa looga hadlayey qorshaha amni ee deeganada maamulka puntland waxaana kasoo qeybgaley wasiirka...
Madaxwenaha Dowlada Federaalka Oo Maamulgoboleedyada Ugu Yeerey Magaalada Muqdisho, Iclaamiyeyna Shir wadatashi Qaran Ah.
Madaxweynaha dowlada federaalka somaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqey maamulgoboleedyada inay kasoo qeyb galaan shir lagu madalsanyahay inuu kadhaco magaalada muqdisho 28-ka bishan October. Kadib 14-kii bishan weerarkii musiibada lagu hoobtey geystay ayaa dalka...